Fiverenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny SEO | Martech Zone
Fiverenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny SEO
Zoma, Septambra 9, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny DIYSEO momba ny fiverenan'ny motera fikarohana amin'ny famatsiam-bola ity dia mety hametraka fanontaniana betsaka kokoa noho ny tena valiny. Miahiahy foana aho rehefa mahita fanambarana lamba firakotra fa ny fantsona iray dia tsara kokoa noho ny sisa rehetra… toa ny tokony hiala amin'ny fampahalalana hafa rehetra ianao? Ireto misy fandinihana vitsivitsy:
Norefesina tamin'ny fampielezan-kevitra tokana ve izany? Raha lazaina amin'ny teny hafa… satria mandrefy ny fiantraikan'ny marketing amin'ny mailaka izy ireo, moa ve manampy ny lanja mandritra ny androm-piainan'ny mpamandrika sy ny fividianana manaraka izay hataony eo an-dàlana? Mieritreritra aho fa mety tsy azony izany!
Miorina amin'ny tranokala roa, ity no fehin-kevitra ho an'ny orinasa rehetra? Heveriko fa tsia!
Hatraiza ny fandaharan-karaman'izy ireo isaky ny tsindry? Firy taona? Inona ny naoty doka nataon'izy ireo? Namatotra hafatra manokana ho an'ny pejin-tsambo nohavaozina sy nohavaozina ve izy ireo mba hampitomboana ny fiverenana?
Firy ny fifaninanana teo amin'ny teny fanalahidy ary naharitra hafiriana vao nahazo laharana tsara ny orinasa?
Moa ve ny fampiasam-bola amin'ny SEO dia nampiditra ny vidin'ny atiny rehetra, ny famolavolana ary ny fampiroboroboana ny tranonkala ankoatry ny fanatsarana azy fotsiny?
Tsy manana ahiahy aho fa ny SEO dia tokony ho singa lehibe amin'ny tetikady marketing amin'ny Internet. Rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny fanatsarana eo an-toerana sy fampiroboroboana ivelan'ny tranonkala, ny orinasa iray dia afaka mampitombo be dia be ny fitarihana, ny kalitaon'ireo fitarihana ireo, ary mampidina ny vidiny isaky ny mitarika hitrandrahana ny Return on Investment. IMO, na izany aza, ity infographic ity dia mety hitarika olona sasany amin'ny fehin-kevitra hafa.
Miarahaba an'i Zoomerang mpanohana vaovao i Martech!
Sep 11, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Io infographic io dia navoaka tamin'ny Desambra 2009. Na dia tsy miteny aza aho hoe marina na tsy marina ny vaovao, dia vetivety dia lany daty eo amin'ity tsena ity ny angona noho ny fiovan'ny teknolojia sy ny fironana.
Ny haino aman-jery sosialy dia azo antoka fa nisy fiatraikany tamin'ny ROI saingy tsy tafiditra ao anatin'ity sary ity izy.
Fotoana izao hakana sary hafa an'ity data ity ihany ary hampitahanao. Ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny sary.
Sep 11, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Fampidirana tsara, Patrick! Manaiky aho - ary misy fiantraikany amin'ny valin'ny fikarohana ny haino aman-jery sosialy ankehitriny ka somary mitongilana aza ny valiny.